ရောင်းရန် Desogestrel ပါ Powder (54024-22-5): ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ & သောက်သုံးသော & အကျိုးသက်ရောက်မှု | AASraw
ရောင်းရန် Desogestrel ပါ Powder: ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ & သောက်သုံးသော & အကျိုးသက်ရောက်မှု
/သတင္းေၾကျငာခ်က္/Desogestrel ပါ/ရောင်းရန် Desogestrel ပါ Powder: ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ & သောက်သုံးသော & အကျိုးသက်ရောက်မှု
အပေါ် Posted 06 / 28 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Desogestrel ပါ. ဒါဟာရှိပါတယ်0မှတ်ချက်.
Desogestrel ပါ Powder အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကို
1.Desogestrel 54024-22-5 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
2.Desogestrel Powder ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
3 ။ လှုပ်ရှားမှု-Desogestrel ပါမှုန့်ယန္တရား
Desogestrel ပါ Powder သုံးပါရန် 4.How?
5 ။ Desogestrel ပါ Powder သောက်သုံးသော
6.Who အဆိုပါ Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုသုံးနိုင်သည်?
7 ။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို-Desogestrel ပါ Powder
8.Desogestrel Powder ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
9.Desogestrel Powder အကျိုးသက်ရောက်မှုမိခင်နို့တိုက်ကျွေးစဉ်
ရောင်းရန် 10.Desogestrel Powder
I.Desogestrel powderbasic ဇာတ်ကောင်:
အမည်: Desogestrel ပါအမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 109-110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်မှုကို Temp: ကို C ရေခဲသေတ္တာ° -20
1 ။ Desogestrel ပါ 54024-22-5 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Desogestrel ပါ နှင့် ethinyl estradiol ပေါင်းစပ်ကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာဟော်မုန်း, Desogestrel ပါနှင့် ethinyl estradiol နှစ်မျိုးပါဝင်သောတစ်ဦးကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆေးလုံးဖြစ်ပြီး, စနစ်တကျယူသောအခါကိုယ်ဝန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝလတိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ကြက်ဥရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကြက်ဥမဟုတ်တော့တဲ့သုက်ပိုးနှင့် fertilization (ကိုယ်ဝန်ရှိ) တားဆီးနေသည်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမတားဆေးနည်းလမ်း 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမြုံဖြစ်လာမှခွဲစိတ်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမမွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများပဋိသန္ဓေတားဆေးထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုအဘို့သင့်ရွေးချယ်စရာဆွေးနွေးပါ။
ဤသည်ဆေးဝါးက HIV ပိုးကူးစက်မှုများသို့မဟုတ်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုတားဆီးမထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအကာအကွယ်မဲ့လိင်ကိစ္စ contact.This ဆေးဝါးပြီးနောက်အဖြစ်အရေးပေါ်ဓတေားကသာသင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်ကြောင့်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
2 ။ Desogestrel ပါ Powder ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထုတ်ကုန်အမည် Desogestrel ပါအမှုန့်
CAS အရေအတွက် 54024-22-5
အရည်ပျော်မှတ် 109-110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်း Temp ကို C ရေခဲသေတ္တာ° -20
3 ။ ယန္တရားအိုf Action—Desogestrel ပါ Powder
အဆိုပါချို့ယွင်းခြင်းနှင့် estrogen receptor မှချည်နှောင်။ ပစ်မှတ်ဆဲလ်အမျိုးသမီးမျိုးပွားကျေးရွာအုပ်စု, အ mammary gland, အ hypothalamus, နှင့် pituitary ပါဝင်သည်။ ပြီးတာနဲ့အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျ Desogestrel ပါနဲ့တူ progestins အဆိုပါ hypothalamus ကနေဖြန့်ချိဟော်မုန်း (GnRH) gonadotropin ၏လွှတ်ပေးရန်၏ကြိမ်နှုန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့် Pre-ovulatory LH (luteinizing ဟော်မုန်း) မြင့်တက်တုံးပါလိမ့်မယ်။
Desogestrel ပါအမျိုးသမီးတားဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ Desogestrel ပါတဲ့ progestin သို့မဟုတ်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေအမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်း, အဓိကချို့ယွင်းတဲ့ဒြပ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်း၌, ဥရင့်ကျက်နှင့်သားဥအိမ် (မျိုးဥထွက်) မှဖြန့်ချိသည်။ အဆိုပါ Ovary ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြက်ဥလွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်သမျှကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဘို့အမိဝမ်း၏နံရံ priming, အဓိကချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပေါ်လျှင်, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချို့ယွင်းသောအဆငျ့အမိဝမ်းနံရံထိန်းသိမ်းမြင့်မားရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်မပါလျှင်တစ်ဦးရာသီကာလများတွင်ရလဒ်, ခန္ဓာကိုယ်ကျဆုံးခြင်းအတွက်အဓိကချို့ယွင်းအဆင့်ဆင့်ပေါ်ပေါက်ဘူး။ Desogestrel ပါလှည့်ကွက်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ဒြပ်အဓိကချို့ယွင်း၏မြင့်မားထိန်းသိမ်းခြင်းအသုံးပြုပုံမျိုးဥထွက်ပြီးသားဖြစ်ပွားခဲ့သည်မူကြောင်းကိုစဉ်းစားစ။ ဒါဟာသားဥအိမ်ကနေကြက်ဥလွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
4 ။ Desogestrel ပါ Powder သုံးပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆရာဝန်များကညွှန်ကြားအတိအကျအတိုင်းဤဆေးဝါးကိုအသုံးပြုသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပိုပြီးမကြာခဏကြောင့်မသုံးကြဘူး, သင်၏ဆရာဝန်အမိန့်ထက်ပိုရှည်အချိန်ကအသုံးမပြုပါကပိုမသုံးပါနဲ့။
တတ်နိုင်သမျှဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပါးစပ် contraceptives အသုံးပြု. ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သူတို့ကိုသင်ယူဖို့ဘယ်လိုအခါနားလည်သင့်တယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သက်ရောက်မှုမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာဆေးပညာလူနာညွှန်ကြားချက်နှင့်တကွကြွလာ။ ဤညွှန်ကြားချက်ကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါလိုက်နာပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုမေးပါ။
ဒါဟာဆေးပညာတက်ဘလက်သာသနာနှင့်အတူအဖုအနာကဒ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဖုအနာ pack ကို၎င်းအဖုအနာဗူးပေါ်ညွှန်ကြားကဲ့သို့တူညီသောနိုင်ရန်အတွက်ယူခံရဖို့လိုအပျကွောငျးကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်နှင့် 28 တက်ဘလက်များပါရှိသည်။
သင်ဤဆေးဝါး အသုံးပြု. စတင်တဲ့အခါ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုယ်ဝန်တားဆီးလိမ့်မည်မတိုင်မီထိန်းညှိဖို့ကအနည်းဆုံး7ရက်ပေါင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးပြားသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသံသရာ၏ပထမဦးဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့ဓတေား၏ဒုတိယပုံစံ (ဥပမာကွန်ဒုံး, spermicide, ဒါမှမဟုတ်မြှေး) ကိုသုံးပါ။
Desogestrel ပါယူပါတစ်ချိန်တည်းနေ့ရက်တိုင်းမှာအမှုန့်။ 24 နာရီထက်မပိုဆေးများအကြားလွန်သွားသည့်အခါပဋိသန္ဓေတားဆေးကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
skip သို့မဟုတ် 24 နာရီထက် ပို. အားဖြင့်သင့်ဆေးလုံးကိုယူပြီးနှောင့်နှေးမနေပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးထိုးလက်လွတ်လျှင်, သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဆေးပြားယူသို့မဟုတ်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုအခြားနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းမှမှတ်မိကိုကူညီမယ့်နည်းလမ်းတွေအဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
သငျသညျအထူးသဖြင့်သင်သည်ဤဆေးပညာယူသောပထမဆုံးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာနေမကောင်းသို့မဟုတ် nauseated ခံစားရပေမည်။ သင့်ရဲ့ပျို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးသွားမပါဘူးဆိုရင်, သင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
သင်ဤဆေးဝါးများသောက်ခြင်း၏3နာရီ4အတွင်းဝမ်းလျှောအော့အန်သို့မဟုတ်ရှိပါကလူနာလက်ကမ်းကြော်ငြာများတွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါသို့မဟုတ်သင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။ တစ်ဦးလွဲချော်ထိုးအဖြစ်ဤဆက်ဆံပါ။
ဒီဆေးဝါးများ၏ဆေးထိုးကွဲပြားခြားနားသောလူနာတွေအတွက်မတူညီတဲ့ရလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အမိန့်ဒါမှမဟုတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်လမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဒီဆေးဝါးကိုသာပျမ်းမျှဆေးများပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ထိုးကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါကသင်၏ဆရာဝန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ကိုပြောပြမှာမဟုတ်လျှင်, ကမပြောင်းပါဘူး။
သငျသညျယူဆေးဝါးပမာဏကိုဆေး၏အစွမ်းသတ္တိအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်နေ့တိုင်းယူဆေးများ၏နံပါတ်, ဆေးများ, သင်သည်ဆေးပညာယူအချိန်အရှည်အကြားခွင့်ပြုခဲ့အချိန်ကိုသင်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုနေသည့်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာပေါ်မူတည်သည်။
သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ရာသီကာလစတင် (ခေါ်တော်မူပြီးနောက် (နေ့ 1 က start ကိုခေါ်) သင့်ရာသီကာလ၏ပထမနေ့၌ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေပေါ်တွင်သင်၏ထိုးစတင်သင်မေးစေခြင်းငှါ တနင်္ဂနွေက start) ။ သငျသညျအခြို့နေ့၌စတင်တဲ့အခါမှာသင်နေတဲ့ဆေးထိုးလက်လွတ်လျှင်ပင်, သင်သည်ထိုအချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာအရေးကြီးပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲပစ်မထားပါနဲ့။ သင်အသုံးပြုသောအချိန်ဇယားကိုအဆင်ပြေမပါရှိလျှင်, ကပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြော။ တစ်ဦးတနင်္ဂနွေက start, သင်ပထမဦးဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုအခြားပုံစံ (ဥပမာကွန်ဒုံး, မြှေး, spermicide) သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံး regimen စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ရက်သတ္တပတ်၏တူညီသောနေ့၌ကုထုံး၏သင်၏နောက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွနောက်ဆက်တွဲ 28 ရက်ကြာ regimen စတင်များနှင့်အတူတူပင်အချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ပါးစပ်သောက်သုံးသောပုံစံ (tablet များ) အတွက်:
·လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်-One ရာသီစက်ဝန်းနှုန်း 21 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ်များထဲမှအစိမ်းရောင်တက်ဘလက် (အာဂွန်) ကနောက်တော်သို့လိုက်7ရက်ဆက်တိုက်နေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာယူအလင်းလိမ္မော်ရောင်တက်ဘလက် (တက်ကြွစွာ) ။
instructions.This ဆေးပညာအဘို့သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါး Call သင်တစ်ဦးထိုးလက်လွတ်လျှင်ဘာလုပ်အပေါ်တိကျတဲ့လူနာညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်။ Read နှင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ဤညွှန်ကြားချက်ကိုဂရုတစိုက်နှင့်သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
သငျသညျကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့ထိုးလက်လွတ်ပြီးနောက်7နေ့ရက်ကာလအဘို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုတစ်စက္ကန့်ပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။
ဤသူသည်သင်တို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်သောကွောငျ့သငျသညျ, တတန်းအတွက်2လအတွင်းသင့်ရဲ့ကာလလက်လွတ်လျှင်သင့်ဆရာဝန်သိတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ထိုးလက်လွတ်သို့မဟုတ်သင့်အချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲပစ်လျှင်သင်အဲဒီလများအတွက်ကာလရှိသည်မဟုတ်ပေမည်။
သင်အချိန်အပေါ်တစ်ဦးဆေးလုံးကိုယူကြဘူးလျှင်သင်အလင်းသွေးထွက်သို့မဟုတ်အစက်အပြောက်များနိုင်ဘူး။ သငျသညျလက်လွတ်ပိုဆေးပြား, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သင်သွေးထွက်ရှိသည်ဖို့ရှိပါတယ်။
♣သင်ရက်သတ္တပတ် 1 သို့မဟုတ်2နှစ်ခုအလင်းလိမ္မော်ရောင်ဆေးပြားလက်လွတ် အကယ်. : နက်ဖြန်နေ့၌တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှစ်ခုဆေးပြားကို ယူ. လာမည့်နှစ်ခုဆေးပြား။ သင် pack ကိုအပြီးသတ်သည်အထိတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးဆေးလုံးကိုယူပြီး Continue ။ သင်တစ်ဦးထိုးလက်လွတ်ပြီးနောက်7နေ့ရက်ကာလအဘို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဒုတိယပုံစံ (ဥပမာကွန်ဒုံး, spermicide) ကိုသုံးပါ။
♣သင်ရက်သတ္တပတ်3နှစ်ခုအလင်းလိမ္မော်ရောင်ဆေးပြားလက်လွတ်, သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်သီတင်းပတ်အတွင်းသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလင်းလိမ္မော်ရောင်ဆေးပြားလက်လွတ်လျှင်လျှင်:
♦နေ့ 1 start: အထုပ်၏ကျန်ထွက်ပစ်နှင့်ထိုနေ့အသစ်တစ်ခု pack ကိုစတင်ပါ။
♦နင်္ဂနွေနေ့စတင်ပါ: အထုပ်၏ကျန်ထွက်ပစ်နှင့်ထိုနေ့အသစ်တစ်ခု pack ကိုစတင်ရန်ထို့နောက်တနင်္ဂနွေသည်အထိတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးဆေးလုံးကိုယူပြီး Continue ။ သငျသညျကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့ထိုး, လက်လွတ်ပြီးနောက်7နေ့ရက်ကာလအဘို့မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဒုတိယပုံစံ (ဥပမာကွန်ဒုံး, spermicide) ကိုသုံးပါ။ သငျသညျတတန်းအတွက်သင့်ရဲ့ရာသီကာလ2လအတွင်းလက်လွတ် အကယ်. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
♣သင်ရက်သတ္တပတ်4အတွက်စိမ်းခုနစ်ဆေးပြားမဆိုလက်လွတ် အကယ်. : သင်လွဲချော်အဆိုပါဆေးပြားများကိုပယ်။ သင် pack ကိုအပြီးသတ်သည်အထိတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးဆေးလုံးကိုယူပြီး Continue ။
6 ။ ဘယ်သူ D ကိုအသုံးပွုနိုငျesogestrelအမှုန့်,
အများစုကအမြိုးသမီး Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သင်လျှင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ:
♦ကာလအကြားသို့မဟုတ်လိင်ပြီးနောက်အတွက် unexplained သွေးထွက်များ
သငျသညျကျန်းမာနေနှင့်သင် Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုယူမထားသင့်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် အကယ်. ♦, သင်သည်သင်၏သွေးဆုံးချိန်အထိသို့မဟုတ်သင် 55 င်တိုင်အောင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Desogestrel ပါအမှုန့်သငျသညျနို့တိုက်နေလျှင်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ Desogestrel ပါပမာဏအနည်းငယ်ကိုသင့်ရဲ့မိခင်နို့သို့ရှောက်သွားစေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤသည်သင်၏ကလေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မိခင်နို့ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
အလွန်မဖြစ်နိုင်မယ့်သော်လည်း, Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်, ဆေးလုံးကိုသင်၏မွေးသေးသောကလေးညှဉ်းဆဲမည်မျှသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည်အကြောင်းစဉ်းစားနေလျှင်, သင့်မိသားစုဆရာဝန်အားဟောပြောသို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံဓတေားဆေးခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။
သင်သည်သင်၏ tummy ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောနာကျင်မှုရှိပါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကိုရယူလိုက်ပါ, သို့မဟုတ်သင့်ကာလပုံမှန်ထက်ထက်အများကြီးတိုတောင်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပါးလျှင်။ ဒီရှားပါးပေမယ့်ဒါဟာအဲဒီတစ်ခု ectopic ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာသတိပေးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သောပါပဲ။
ဒါကြောင့်လိင်ကြားဖြတ်ပါဘူး , သင့်ကာလပေါ့ပါးဖြစ်နိုင်သည်ပိုပြီးမကြာခဏ, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, သငျသညျကာလအကြားအစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ရစေခြင်းငှါ - သင်ကယူစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ
သငျသညျဟော်မုန်းပေါင်းဆေးလုံး၌အီစရိုဂျင်, တားဆေး patch ကိုများနှင့်အင်္ဂါဇာတ်လက်စွပ် ယူ. မသွားနိုင်လျှင်အသုံးဝင်မယ့် သငျသညျနေ့စဉျနေ့တစ်ချိန်တည်းမှာသို့မဟုတ်န်းကျင်ကယူသတိရဖို့လို
သင်သည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မှာအသုံးပွုနိုငျ - သင် 35 ကျော်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်များမှာပင်လျှင် အချို့အပါအဝင်အချို့သောဆေးဝါးများ (ဆန်း) ပဋိဇီဝဆေးဒါကြောင့်ဒီထက်ထိရောက်စေနိုင်သည်
8 ။ Desogestrel ပါ Powder ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
သင်တစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရယူပါ: အသင်းအဖွဲ့ချုပ်; ခက်ခဲအသက်ရှူ; သင်၏မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း, နှုတ်ခမ်း, လျှာ, သို့မဟုတ်လည်ချောင်း။
ပဋိသန္ဓေတားဆေးကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်ကရှိပါကတစ်ပြိုင်နက်သင်၏ဆရာဝန်ကိုပဌနာ:
♦ (အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏တဦးတည်းဘက်မှာ) လေဖြတ်-ရုတ်တရက်ထုံသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း၏လက္ခဏာသက်သေရုတ်တရက်ပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း, slurred မိန့်ခွန်း, ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူပြဿနာများ;
♦အသှေးကိုတက်ချောင်းဆိုးနေတဲ့အသွေးအဆုတ်-ရင်ဘတ်နာကျင်မှုအတွက်သွေးခဲ, ရုတ်တရက်ချောင်းဆိုးခြင်း, အသက်ရှူကြပ်, လျင်မြန်စွာအသက်ရှူလက္ခဏာ;
♦တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးခြေထောက်၌သင်တို့၏ခြေထောက်-နာကျင်မှု, ရောင်ရမ်းခြင်း, နွေးထွေးမှု, ဒါမှမဟုတ်နီခြင်းအတွက်တစ်သွေးခဲ၏အရိပ်လက္ခဏာ;
♦နှလုံးရောဂါလက္ခဏာများ-ရင်ဘတ်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဖိအား, သင့်မေးရိုးသို့မဟုတ်ပခုံးမှဖြန့်နာကျင်မှု, ပျို့, ချွေး,
♦အသည်းပြဿနာများ-ပြင်းထန်အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း, အဖျား, ပင်ပန်းခံစားချက်, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, မှောင်မိုက်ဆီး, ရွှံ့-အရောင်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, အသားဝါ (အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်);
သင့်ရဲ့လက်, ခြေဆစ်, ဒါမှမဟုတ်ခြေရောင်ရမ်းခြင်း♦;
တစ်ရင်သားကင်ဆာစိမ်း♦; သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ-အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာများ, အားနည်းခြင်း, ပင်ပန်းခံစားချက်, ခံစားချက်ပြောင်းလဲမှုများရောဂါလက္ခဏာတွေ။
ပျို့ (သင်ပထမဦးဆုံးဒီဆေးဝါးကိုယူပြီး start အထူးသဖြင့်လာသောအခါ), အန်, ဖောင်း♦;
♦တင်းတိပ်သို့မဟုတ်မျက်နှာအရေပြားမိုက်, တိုးမြှင့်ဆံပင်ကြီးထွားမှု, ဦးရေပြားဆံပင်ဆုံးရှုံး;
ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အခြားသူများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်သင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။ သငျသညျ 1-800-FDA က-1088 မှာ FDA ကမှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသတင်းပို့လိမ့်မည်။
9 ။ Desogestrel ပါ Powder အကျိုးသက်ရောက်မှုမိခင်နို့တိုက်ကျွေးစဉ်
Breastfed သောရင်သွေးငယ်များအတွက် (1) အကျိုးသက်ရောက်မှု
တစ်ဦးက nonblinded, nonrandomized လေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပါးစပ် Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုနေ့စဉ်တစ်ဦးတည်း mcg 75 (ဎ = 42) တစ်ခု Intrauterine device ကို (IUD; ဎ = 40) အားဓတေားများအတွက်ရက်ပေါင်းကိုရွှေ့ဆိုင် 28 မှ 56 စတင်နေပြီ။ မွေးကင်းစကလေးအရှည်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု, အလေးချိန်သို့မဟုတ် biparietal ဦးခေါင်းကိုလုံးပတ် 1,4နှင့်7ကုသမှုသံသရာပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယာယီရင်သားကင်ဆာပျတိုး2မွေးကင်းစအစီရင်ခံခြင်းနှင့်တိုးပွားလာခဲ့သည်ချွေးအဆိုပါ IUD အုပ်စုတွင်မွေးကင်းစအစီရင်ခံမျှဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, Desogestrel ပါမှုန့်အုပ်စု 1 မွေးကင်းစကလေးအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အချို့မွေးကင်းစများ၏တိုးတက်မှုနောက်တဖန် 1.5 နှင့် 2.5 နှစ်ပေါင်းမှာတိုင်းတာကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဆေးခန်းအရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်မျှ။
တစ်ဦးက breastfed (အတိုင်းအတာဖော်ပြထားမဟုတ်) မွေးကင်းစကလေးအသက်4လအတွင်းမှာ scrotal ဆံပင်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မယ်တော်ဟာလက်ခံရရှိခဲ့ progestin, ကိုယ်ဝန်၏ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်း dydrogestrone နှင့် 0.0753လအတွင်းရွှေ့ဆိုင်မှာစတင်မယ့်တားဆေးအဖြစ်နေ့စဉ် MG Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ မယ်တော် Desogestrel ပါ 28 ရက်အကြာမှာမှုန့်နှင့်အသက် 11 လအတွင်းခြင်းဖြင့်ပြေလည်သည့် scrotal ဆံပင်ရပ်စဲ။ Desogestrel ပါမှုန့်ကဒီကလေးငယ်ကိုအတွက် scrotal ဆံပင်ကြီးထွားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးအကြောင်းမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
နို့တိုက်နှင့် Breastmilk အပေါ် (2) အကျိုးသက်ရောက်မှု
တစ်ဦးက nonblinded, nonrandomized လေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပါးစပ် Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုနေ့စဉ်တစ်ဦးတည်း mcg 75 (ဎ = 42) တစ်ခု Intrauterine device ကို (ဎ = 40) အားဓတေားများအတွက်ရက်ပေါင်းကိုရွှေ့ဆိုင် 28 မှ 56 စတင်နေပြီ။ အဆိုပါ 7-လအစမ်းကာလအတွင်းမှာတော့ 1 မိန်းမ IUD အုပ်စုတွင်အဘယ်သူအားမျှနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျော့နည်းသွားနို့၏တရားခွင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနှင့်စတုတ္ထကုသမှုသံသရာ၏အဆုံးမှာ, Desogestrel ပါမှုန့်နှင့် IUD အုပ်စုများအကြားထုတ်လုပ်နို့၏ပမာဏမကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ triglyceride, ပရိုတိန်းသို့မဟုတ်နို့ Lactose ကိုအကြောင်းအရာမကွဲပြားမှုကုထုံး၏ 1,4နှင့်7သံသရာ၏အဆုံးမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးက nonrandomized လေ့လာမှု 200 ရက်သတ္တပတ်ကိုရွှေ့ဆိုင်မှာစတင်များနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုလက်ခံရရှိသူကိုအမျိုးသမီးတွေ 75 သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်6လအတွင်းနေ့စဉ် mcg တစ် Desogestrel ပါအမှုန့်တားဆေး6ပေးထား 200 အမျိုးသမီးတွေနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ခြားနားချက်နှစ်ခုအုပ်စုများအကြားနို့ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်မွေးကင်းစကလေးတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပမာဏသာရှိရှာတွေ့ခဲ့သည်မရှိပါ။
10 ။ ရောင်းရန် Desogestrel ပါ Powder
Desogestrel ပါ Powder ပေးသွင်းအပေါ် (1) နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်
♣ OK ကို-ဇီဝနည်းပညာ
ယခု (2) ဝယ် Desogestrel ပါ Powder
Google က AASraw ♦, www.aasraw.com ထဲသို့မဝင်ရ။
AASraw အပေါ်♦ရှာရန် Desogestrel ပါ Powder
♦အထဲက Find Desogestrel ပါ Powder ပြတင်းပေါက် XP ကို, သင်၏ requirmnets ချရေးပါ။
AASraw မှစ. ယ်ယူရန် Desogestrel ပါမှုန့် (3) Andvantage
ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှင့်အတူ 1.High အရည်အသွေး:
1) သန့်ရှင်းစင်ကြယ်:> 99%
2.Fast ပြီးတော့ကို Safe Delivery:
1) ကှကျပေးချေမှုပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းထုတ်ကိုစလှေတျနိုငျသညျ။ ရရှိနိုင်ခြေရာကောက်အရေအတွက်ကို
2) လုံလုံခြုံခြုံနဲ့သတိပညာရှိတင်ပို့။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအတွက်အမျိုးမျိုးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ။
3.We ကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံး Clients တွေအနေနဲ့ဖူး:
1) Professional ကဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖောက်သည်လွယ်ကူမှာခံစားရပါစေ, လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာနှင့်အစာရှောင်ပေးပို့သူတို့၏ဆန္ဒဖြည့်ဆည်း။
2) Market ကတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများတုံ့ပြန်ချက်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံ, တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
3) မြင့်မားသောအရည်အသွေး, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းမြန်ဆန်ပေးပို့, ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ထံမှယုံကြည်မှုနှင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရဖို့။
1) ကို Safe ပေးပို့: Channel ကိုအမျိုးမျိုး, ပဲအမှု၌ customers.And ၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေး, re-သင်္ဘောမှအာမခံပါသည်။
2) ကိုပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ: အဆိုပါထုတ်ကုန်အမြဲအရည်အသွေးမြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုသည်ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်, မြင့်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
3) ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကို: အမျှလျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှဖောက်သည်လုံခြုံစွာကုန်ပစ္စည်းများခံယူနိုင်အောင်, ဖောက်သည်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်။
Tags: Desogestrel ပါအမှုန့်ကိုဝယ်, Desogestrel ပါအမှုန့်
161 Views စာ
သင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ တစ်ခုမှန်ကန်သော email address ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။
ဤသည်ကိုသင် Bortezomib အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံး Is ဘယ်လိုအများကြီး 4-DHEA testosterone သို့ပြောင်းလာ?
admin ရဲ့, admin ရဲ့ on -Phenylpiracet ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
admin ရဲ့, admin ရဲ့ on ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Powder ဖြည့်စွက်
admin ရဲ့, admin ရဲ့ on အထိရောက်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်: Sibutramine အမှုန့် (Meridia)
admin ရဲ့, admin ရဲ့ on အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ်ဆေး J147: တစ်ဦးကအစွမ်းထက် Curcumin အနကျအဓိပ်ပါယျ J147 Neurotrophic ခြံဝင်း
Sunifiram ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
Noopept ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
Bromantane ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန် 8 မေးခွန်းများကိုမတိုင်မီ Cetilistat အမှုန့်ကိုယူ
အထိရောက်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်: Sibutramine အမှုန့် (Meridia)
Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော55 ထဲက
Sibutramine Hydrochloride အမှုန့်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော45 ထဲက
မူပိုင်ခွင့်© 2018 All rights reserved aasraw ။ ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူမှာ aasraw.com